မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စာချုပ်ပါ အသုံးအနှုန်းမှားယွင်း၊ Common Border ကို ဝန်ကြီးသိပါသလားဟု ပြည်ခိုင်ြ? - Yangon Media Group
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စာချုပ်ပါ အသုံးအနှုန်းမှားယွင်း၊ Common Border ကို ဝန်ကြီးသိပါသလားဟု ပြည်ခိုင်ြ?
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၅
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှစ်နိုင်ငံချုပ်ဆိုသည့်စာချုပ်တွင် နိုင်ငံတကာနယ်နိမိတ် Internal အသုံးအနှုန်းအစား Common Borderom သုံးသင့်ကြောင်းနှင့် Common Border ကို ဝန်ကြီးသိပါသလားဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်မြင့်က မေးခွန်းထုတ်လိုက်သည်။
ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် မင်းကင်းမဲဆန္ဒနယ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်မြင့်က၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၁ဝ ရက်က သင်္ဂဟဟိုတယ်တွင် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကျင်းပခဲ့သော အစည်းအဝေးတွင်သ ဘောတူညီချက်ရှစ်ချက်ချမှတ်ခဲ့ပြီး၊ အချက်(င)တွင် မြန်မာနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအကြား နိုင်ငံတကာနယ်နိမိတ်နှင့် မြန်မာပိုင်နက်နယ်မြေပေါ်၌တည်ဆောက်ထားသော ခြံစည်းရိုးအကြားဟု ဖော်ပြထားပါသဖြင့် နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဟုသာသုံးသင့်သော်လည်း၊ နိုင်ငံတကာနယ်နိမိတ်ဟုမည်သည့်အတွက်ကြောင့် သုံးစွဲခဲ့ရ ကြောင်းနှင့် မှားယွင်းသုံးနှုန်းခဲ့သည်ဆိုပါက ပြန်လည်ပြင်ဆင် ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိမေးမြန်းခဲ့ရာတွင် ယင်းသို့ထည့်သွင်းပြော ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”နယ်နိမိတ်ကိစ္စရပ်များသည် Delicate ဖြစ်သလို Sensitivity လည်း များစွာမြင့်မားပါကြောင်း မှားယွင်းသုံးစွဲခဲ့တဲ့ စကားလုံးအသုံးနှုန်းတစ်ခုကြောင့် မိမိနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်နိုင်ပါကြောင်း၊ အခုတစ်ခါ နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်မှာ မလိုလားအပ်သည့် နိုင်ငံတကာနယ်နိမိတ် Internal တွင် နေထိုင်ကြသူများဆိုသည့်အသုံးအနှုန်းမှာ တိုင် ပြည်အတွက် အန္တရာယ်ကိုဖိတ် ခေါ်သလိုဖြစ်နေပါတယ်”ဟု ဦးမောင်မြင့်ကပြောသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင့် က Internal မှာ နိုင်ငံတကာကျင့်ထုံးအသုံးအနှုန်းနှင့် အညီအသုံးပြု ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းအချက်အလက်များနှင့်ဖြေကြားခဲ့ရာ ဦးမောင်မြင့်က ဆက်စပ်မေးခွန်းအဖြစ် ပြန်လည်မေးမြန်းခဲ့သည်။
”ဒီနေရာမှာတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ရပ်တည်ချက်ယူရတာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်အခုကိုင် ထားတာကလည်း စာချုပ်တွေပါပဲ။ ဒီစာချုပ်တွေမှာ Common Border Area သုံးထားပါတယ်။ ဒါကို မြန်မာပြန်ထားတာက ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှအစိုးရတို့သည် နှစ်နိုင်ငံနယ် ခြားတစ်လျှောက်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် တိုးတက်စေရန်အတွက်လည်း ကောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်ခြားဒေသ များတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ပြဿနာများကို ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ဒီလိုမျိုး ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ တော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာက တိုင်းသိပြည်သိကမ္ဘာသိပါ။ အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန် တော်တို့ကစာချုပ်ထဲမှာပါတဲ့ Common Border သုံးမလား၊ Internal သုံးမလား။ ကျွန်တော်တို့က Common Border မသုံးရင် ဘာအကျိုးရှိမလဲ။ Internal သုံးရင် ဘာအကျိုးယုတ်မလဲဆိုတာ ဒါကတော့ ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ရပ်တည်ချက်ပါ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ စာချုပ်(၄)ခုစလုံးကို လေ့လာပြီးပါပြီ။ ဒါ ကြောင့်မိုလို့ Common Border လေးကိုရော ဝန်ကြီးသိပါ သလားလို့ မေးမြန်းအပ်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။
ဆက်စပ်မေးမြန်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့် က Internal ဆိုသည့် အသုံးကို နိုင်ငံတကာကျင့်ထုံးနှင့်အညီ သုံးနှုန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ ”အရပ်အသုံးအစွဲမှာဖြစ်စေ၊ စာစောင်တွေမှာရေးတာဖြစ်စေ၊ ရှင်းလင်းသဲကွဲမှုရှိအောင် မိမိတို့ ကြိုက်သလိုရေးဆွဲလို့ရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ ကျင့်ထုံးနဲ့အညီပဲ သုံးနှုန်းရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ မိမိတို့သုံးစွဲ ခြင်းဟာ မှန်ကန်တယ်လို့ ထပ် လောင်းအတည်ပြုပြောကြားလိုပါတယ်”ဟု ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီးဦးကျော်တင့် ကပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်း ထောက်များက ဦးမောင်မြင့်အား ထပ်မံမေးမြန်းရာ ”ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ရပ်ပြီးတော့မှ ဒါကိုမေးတာပဲ။ ဒီဟာကိုမေးလို့ သက်ဆိုင်တဲ့သူ တွေက ငြိုငြင်မှာတွေ၊ စိတ်ကွက်သွားတာတွေ ငါတို့မှာမရှိဘူး။ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက် ရပ်ပြီးတော့မေးတယ်။ အထောက်အထားရှိတယ်။ ဒါပဲ”ဟုပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
ပြည်တွင်း SME လုပ်ငန်းများအတွက် JICA ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅ဝ ဘီလီယံ ရရှိထား
ပဲခူးတိုင်းအတွင်းရှိ တောင်နဝင်း ပင်မရေလှောင်တမံ၏ ထိပ်မျက်နှာပြင်တွင် အက်ကြောင်းဖြစ်ပေါ်မ??
လာမည့်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ရန်ကုန်ရှိ ဈေး ၂၁ ခုကို အဆင့်မြှင့်တင်မည်
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်တွင် ဘိလပ်မြေစက်ရုံစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းပေးရန် ပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြနေသည့် ဒေသခ?
နိုင်ငံရေးသမားများက လျှပ်စစ်မီတာခ ဈေးတက်မည်ဟု ပြောကြားမှုများကြောင့် သြစတြေးလျတွင် ဆိုလာ?
ဂျွန်စတုန်းကြောင့် ကွန်ပနီကို အရဲစွန့် အသုံးပြုရတော့မည်ဟု ဂွါဒီယိုလာ ဝန်ခံ
ဇနီးမောင်နှံအဖြစ် သရုပ်ဆောင်မည့် မင်းသားဂျီဆောင်နှင့် မင်းသမီး ဟန်ဂျီမင်းတို့၏ ဒရာမာဇာတ်?